10 Mmehie Twitter | Martech Zone
Wednesday, June 12, 2013 Tuesday, June 11, 2013 Douglas Karr
Dịka nwa okorobịa na-ejikwa ọkara Twitter iri na abụọ (nke onwe, akwụkwọ, ụlọ ọrụ, blọgụ na obodo), m ga-ekwenyeghi na # 8 na akwụkwọ ozi a. Enwere m obi abụọ banyere ndị agha mmiri Veterans na m @IGIHE akaụntụ twitter chọrọ ịnụ banyere ịde blọgụ ụlọ ọrụ na @IGIHE… Na onweghi onye choro inu nti m na ndoro ndoro ochichi m!
Twitter, dị ka ikpo okwu ọ bụla, bụ ụzọ ọzọ ndị mmadụ si agwa ndị ọzọ okwu. Ma enwere ụfọdụ omume Twitter adabaghị adaba ma daa ada, ọ bụ ezie na ha nwere ike bụrụ ihe a na-enyo enyo na ọ ga-adọta na Twitter, na-emebi emebi karịa mgbe ha mere n'ihu ọha. Ya mere ọ bụrụ na ị na-eme na-eme nke ọ bụla n'ime ndị a 10 njehie nke ikpe (a ụtọ DashBurst mmekota na Madị Maple) na tweets gị ma ọ bụ ka njọ n'okporo ámá, biko kwụsị ozugbo!
Enwere m ekele maka mkpali mmụọ nsọ nke oge (# 7) tweet maka mkpali!
Tags: mgbawanjehie twitter
Jun 17, 2013 na 1:07 AM
Ahụghị m ihe na-ezighi ezi banyere ụfọdụ isi ihe. Nke a bụ etu ndị mmadụ si akpa agwa n’ezie. mana ha anaghị akpa agwa otu a na Twitter.
Jun 17, 2013 na 4:01 AM
Daalụ maka inye m okwukwe na ụfọdụ ndị na-ajụ dị ka ndị a agwa ka m! hehe M na-ekweta na m nwere ike ịbụ nwata na curmudgeonly, mana enweghị m ike maka ndụ m na-ahụ ihe mere ndị mmadụ anaghị ewe oge iji na-amatakwu onwe banyere ụfọdụ n'ime ihe a. Pụrụ iche aha ga-aga (nke ebumnuche) mmụọ nsọ na-ekwu okwu ya nke ihe mkpofu okpukpe na nke ime mmụọ na-eme ka m maa jijiji mgbe ọ na-egosi na ndepụta.
Sep 24, 2013 na 6: 42 AM
Ekwenyeghi na # 1 na # 7, onye ọ bụla na-eji Twitter maka ebumnuche dị iche iche, ndị mmadụ nwere nhọrọ ịghara ịgbaso, mana n'ozuzu ya ọmarịcha ndepụta
Sep 24, 2013 na 10: 07 AM
Ekwenyere m - enweghịkwa m mmasị na ndepụta ọ bụla nke "iwu" nke enyere otu usoro mmekọrịta mmekọrịta na-eto eto.